🥇Funda indlela yokurhweba ngeBitcoin ngoJanuwari ka-2022 | Funda isiKhokelo soRhwebo esi-2
Funda ngokuThengisa iBitcoin-Isikhokelo sokugqibela sokuThengisa iBitcoin!
Ukurhweba ngezezimali zedijithali kwinduduzo yasekhaya akuzange kube lula kumndilili wakho weJoe. Imali yedijithali yokuqala yolawulo emhlabeni - i-Bitcoin isala iyeyona nto ithengiswa kakhulu kwihlabathi jikelele.
Kwesi sikhokelo, sihamba ngezona mfuno zibalulekileyo ukuya funda indlela yokuthengisa i-Bitcoin. Sithetha ngeefizi ze-broker ezikwi-Intanethi, iindlela zokurhweba, iiodolo, ulawulo lomngcipheko, kunye nokunye!
Icandelo 1: Qonda iziseko zeNtengiso yeBitcoin
Ngokubanzi kubulelwe ukuthengiswa kunye nokungazinzi, iBitcoin ihlala ibizwa ngokuba yigolide yedijithali. Kananjalo, kubaluleke kakhulu ukuba uyaziqonda iziseko ezingenanto zokuthengisa le cryptocurrency ngaphambi kokuba ungene.
Ngokwenza njalo, uya kuzinika elona thuba lifanelekileyo lokurhweba ngendlela engabekiyo kwaye ibaliwe.
Zeziphi iziseko zoThengiso lweBitcoin?
Ukubeka ngokulula, urhwebo lweBitcoin lubandakanya ukuzama ukubikezela ngokuchanekileyo ukunyuka kwamaxabiso kwemali yedijithali kamva ezantsi emgceni. Ixabiso lokuyalelwa kukubonelelwa kunye neemfuno zeemarike.
Jonga apha ngezantsi umzekelo osebenzayo worhwebo lweBitcoin ukucoca inkungu:
Khawufane ucinge ukuba uthengisa i-Bitcoin ngokuchasene ne-euro
Oku kuyakuboniswa njenge-BTC / i-EUR kwintengiso yakho oyikhethileyo kwi-Intanethi
Ngexesha lokuthengisa kwakho, i-BTC / i-EUR ixabiswa kwi-45,162 yeedola
Uziva ngathi esi sibini siza kubona ukunyuka kwamaxabiso- uthatha isigqibo sokuthatha amanyathelo a kuthenga iodolo enexabiso le- $ 1,000
Iiyure zidlula kwaye i-BTC / i-EUR inyuka ngexabiso nge-5% -elingana nexabiso elitsha le- $ 47,420
Ukusuka kwi- $ 1,000 yokuqala oyibekileyo- wenze iinzuzo ze- $ 50 ($ 1,000 + 5%)
Njengoko ubona, ukuba uthenga isibini seBitcoin kwaye uchanekile nge-hypothesis yakho, ume ukuze wenze inzuzo. Kulabo abangaziyo, unokuhamba ngokufutshane kwi-Bitcoin-esiyigubungela kamva kwesi sikhokelo.
Iibini zeBitcoin zokuThengisa
Xa ujonge ukufunda indlela yokuthengisa i-Bitcoin, uya kubona ukuba kukho iindidi ezahlukeneyo zokurhweba etafileni. Ukuba ukhe wathengisa i-forex ngaphambi kokuba wazi kancinci ukuba isebenza njani le nto.
Kwabo bangenamava ezemali nakowuphi na umthamo - urhwebo lwe-cryptocur lwemali luququzelelwa ngababini. Izibini zokurhweba zikwenza ukwazi ukudibanisa amaxabiso phakathi kweemali ezahlukeneyo kunye nokuseka ixabiso lazo.
Eyona ndlela ixhaphakileyo yokurhweba ngeBitcoin, ngakumbi ii-newbies, kukudlula kwi-'crypto-to-fiat'. Oku kubandakanya ukuthengisa iBitcoin ngokuchasene nemali ye-fiat. Ukubeka ngokulula, imali ye-fiat yamkelwe kwaye ihlala iveliswa ngurhulumente. Amanye amaqonga orhwebo abiza la maqela 'yiminqamlezo yemali'.
Elinye lawona maqela athengiswa kakhulu kolu luhlu yiBitcoin ngokuchasene nedola yaseMelika- eboniswe njenge-BTC / USD. Ezinye izibini ezithandwayo zibandakanya iBitcoin ngokuchasene (GBP) neeponti zaseBritane, i-euro (i-EUR), iiSwitzerland franc (CHF), kunye needola zase-Australia (AUS).
Ukuqhubeka nokucacisa, ukuba uthengisa i-BTC / AUS kwaye ucatshulwe ngama- $ 68,545- yonke i-Bitcoin ixabisa i-1 yeedola zase-Australia.
Kananjalo, ukuba uthengisa i-BTC / EUR kwaye ubona ixabiso le- € 44,547- yonke i-Bitcoin ixabisa i-1 euros.
Jonga umzekelo ongezantsi wentengiso ye-fiat-Bitcoin:
Unomdla wokuthengisa i-Bitcoin ngokuchasene needola zase-Australia
Esi sibini siya kuboniswa njenge-BTC / AUD, kwaye ucatshulwe kwi-AU $ 67,749
Unoluvo olomeleleyo amaxabiso esi sibini aya kuphakama - ke beka iodolo yokuthenga eyi- $ 500
Umcimbi wokudlula kweentsuku kwaye i-BTC / AUD inexabiso kwi-AU $ 77,234
I-Bitcoin ngokuchasene ne-AUD inyuke ngexabiso nge-14% - ke ukubikezela kwakho kuchanekile
Kananjalo, ubeka thengisa odola ukuze ukwazi ukufumana imali kwiinzuzo zakho
Njengoko ubona, kuba i-BTC / AUD inyuke ngexabiso (njengoko ubukrokrela ukuba injalo) -uyenzile inzuzo engama- $ 70 ($ 500 + 14%).
Sichaze umzuzwana odlulileyo ukuba uninzi lwabaqalayo bakhetha ukurhweba nge-Bitcoin ngababini be-crypto-fiat. Isizathu soku kukuba kulula kakhulu ukuthelekisa kwisibini kubandakanya nemali ye-fiat ekhutshwe ngurhulumente kunokuba yenye yedijithali.
Njengoko besesitshilo, ukuba ucinga ukuba iBitcoin imalunga nokuhla, unokukhetha ukuya kufutshane nakwimali yedijithali. Kungenxa yokuba izibini zeBitcoin zihlala zithengiswa ngeCFDs - esithetha ngayo kungekudala.
Enye indlela yokuthengisa le asethi eguqukayo kukuyithengisa ngokuchasene nenye imali yedijithali. Oku kubizwa ngokuba yi-crypto-cross pair (ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yi 'crypto-cross'). Umzekelo, ukuba ubuza kuthengisa iBitcoin ngokuchasene neRipple- oku kuya kuboniswa njenge-BTC / XRP.
Jonga ngezantsi komzekelo, usebenzisa i-BTC / XRP:
I-cross pair ye-BTC / i-XRP ixabiso ngama-93,587
Kananjalo, kwi-1 Bitcoin nganye, intengiso iya kukunika i-Ripple engama-93,587
Ilula ngoluhlobo. Umbuzo ngulo- ngaba izinga lokutshintshiselana ngesibini esichaphazelekayo liya kunyuka okanye liwe? Kukho iindlela ezahlukeneyo zokuzinceda xa kusenziwa izigqibo ezifanelekileyo. Kananjalo, eyona nto ibalulekileyo kukwenza uphando oluninzi kwimakethi oyikhethileyo.
Ungayithengisa njani iBitcoin: Ixesha elifutshane okanye ixesha elide?
Ngoku sithethile malunga neziseko, kufuneka sigubungele indlela yokuthengisa i-Bitcoin ngokufutshane kwaye ixesha elide.
Ii-CFD ngaphandle kwamathandabuzo yeyona ndlela ixhaphakileyo yokuthengisa nayiphi na i-asethi okwexeshana kwezi ntsuku. I-Bitcoin CFDs ilandelela ixabiso lehlabathi lokwenyani lemali yedijithali -ukugcina isidingo siqu .
I-Bitcoin CFDs ikwenza ukuba wena njengomrhwebi uqikelele kwaye 'ufutshane' ukuba ucinga ukuba iBitcoin ixabise kakhulu kwaye imalunga nokubona ukuhla kwexabiso. Oku kwenziwa ngokudala i-odolo yokuthengisa ngokusebenzisa umthengisi we-Intanethi.
Jonga umzekelo weBitcoin CFD engezantsi:
Uthengisa iBitcoin ngokuchasene neStellar
I-BTC / XLM inexabiso nge-114,322
Ngokuqinisekileyo, i-Bitcoin CFD yakho ikwaxabiswa nge-114,322
Ukuba ucinga ukuba isibini siza kwenza njalo kuvuka Ngexabiso-yenza ifayile kuthenga odola kwiqonga lokurhweba olikhethileyo
Kwelinye icala, ukuba ucinga ukuba iya kuba njalo bawe Ngexabiso-yenza ifayile thengisa Umyalelo kwiqonga lokuthengisa
Ukuba isibini siyaphakama okanye siyawa, ngokuhambelana ne-hypothesis yakho-uya kwenza inzuzo kolu rhwebo
I-Bitcoin CFD zihlala zigcinwa zivulekile imizuzu, iintsuku, okanye kwezinye iimeko iiveki. Ixesha elincinci leCFDs lishiywe livulekile ngcono. Kungenxa yokuba usuku ngalunye urhwebo lweCFD luyekwa luvulekile umrhumo wemali wobusuku uya kuhlawulwa Abanye ababoneleli baya kubhekisa kule 'njengemali yokutshintsha', kwaye, intlawulo ihlala iphakame kancinci kwimpelaveki.
Kubarhwebi abanjengo-eToro, uyakuyibona intlawulo yobusuku bakho xa ungena kwisibambiso sakho. Oku kukuvumela ukuba ubone ngokuthe ngqo ukuba uhlawula ngantoni kwimirhumo yokuxhasa ngemali kurhwebo lwakho lweCFD.
Ngale nto ithethwayo, ukuba ucinga ukuba ungafuna ukufumana isicwangciso sexesha elide kwaye uphephe ezi ntlawulo- jonga ngezantsi.
Thenga kwaye ubambe iBitcoin
Abarhwebi bexesha elide bathanda ukuthenga iBitcoin kwaye babambelele kuyo- yiyo loo nto igama lesicwangciso libizwa ngokuba 'kukuthenga nokubamba'. Kwimeko yeemali zokugcina imali, ngakumbi oku kuhlala kubizwa ngokuba yi-'HODLing '. Ergo, ukuba uthenge i-Bitcoin kwaye ubambelele kuyo-uyi 'Hodler'!
IiHodlers zihlala zibambelele kwiBitcoin kangangeminyaka ngaphambi kokufumana imali yazo. Kumnikezeli weBitcoin ophakame kakhulu, uya kuba nakho kuthenga I-Bitcoin ngokuthe ngqo-ngelixa ungahlawuli kwanto kwimirhumo yekhomishini. Oku kuyakwenziwa ngokudityaniswa kwezorhwebo kwaye uya kunikwa isipaji seBitcoin xa usayina.
Ngokuthengisa i-Bitcoin kwixesha elide, awusayi kuphinda uzixhalabise nangaliphi na ixesha elifutshane lokungazinzi kwintengiso. Icebo lokuthenga nokubamba likwasika imfuno yokwenza uhlalutyo lobugcisa yonke imihla.
I-eToro ibonelela ngokufikelela kwi-16 yemali yedijithali nangaphezulu kwama-90 amabini athengiswayo. Oku kubandakanya inqwaba yezibini zewayini eziwela umnqamlezo, kunye nezibini ze-fiat-to-crypto ezinje nge-BTC / USD- nezinye ezininzi, ukuba ufuna ukwahluka kamva.
Icandelo 2: Funda ii-odolo zeBitcoin
Ukuthengisa i-Bitcoin kufuneka ukwazi ukujamelana nesiqhwithi ngokuchasene nokungazinzi okukhulu. Kananjalo nokubaluleka kwayo - ezinye iiodolo zinokukunceda ekunciphiseni ilahleko kurhwebo ngalunye.
Ukuqala ngeyona migaqo isisiseko yokuthengisa i-Bitcoin - thenga uthengise. Ukubeka ngokulula, ukuba ucinga ukuba iBitcoin ayixabisekanga kwaye malunga nokubona utshintsho lwamaxabiso anyukayo- kufuneka ungene kwintengiso kuthenga Umyalelo. Ukuba kunjalo, xa ilixesha lokuphuma kwisikhundla sakho-kuya kufuneka usebenzise ifayile ye- thengisa umyalelo.
Ukuba ucinga ukuba iBitcoin ixabisiwe kwaye iya kuba namava kuncipha Ngexabiso-yenza ifayile ye- thengisa Uku-odola kumthengisi wakho. Xa unqwenela ukuphuma kwemali, uya kuphuma kwintengiso nge kuthenga umyalelo
Ixabiso lokutshintsha kweBitcoin mzuzwana ngamnye odlulayo, ke kubaluleke kakhulu ukuba nezicwangciso zokungena nokuphuma zilungiselelwe yonke into enokwenzeka.
Ukuqala ngeemarike kunye nokunciphisa umda, uya kubona inkcazo yazo zombini apha ngezantsi.
'I-odolo yentengiso' ihlala isetwa ngokungagqibekanga xa ungena kwisikhundla kubarhwebi kwi-Intanethi. Lo myalelo wokuqala uxelela umthengisi ukuba uyalithanda ixabiso lentengiso leBitcoin kwaye ufuna iodolo yakho yenziwe kwangoko.
Ngokukodwa, ngenxa yotshintsho rhoqo kwixabiso leBitcoin-ixabiso olibonayo xa wena misela umyalelo kunye nawe uthole ziya kwahluka.
Ucatshulwe kwi-53,427 yeedola kwi-BTC / USD
Uyonwabile ngelo xabiso, ubeka i-odolo yentengiso
Iqonga lokurhweba liphumeza iodolo yakho kwangoko
Ujonga iodolo kwaye ixabiso li- $ 53,428
Oku kungafani ngumzuzu, kodwa akunakuphepheka nangona kunjalo, ngenxa yokutshintsha kwamaxabiso rhoqo
Enye indlela yokungena kwimakethi yeBitcoin kukusebenzisa 'umda woku-odola'. Oku kwenza ukuba ukhethe elakho ixabiso lokungena.
I-Bitcoin ixabiso ngama- $ 53,427 kwaye unomdla wokubeka i-oda yokuthenga
Nangona kunjalo, awunamdla wokungena kwiimarike de inyuke iye kwi-57,200 yeedola
Kananjalo, kuya kufuneka usete umda woku-odola kwi- $ 57,200 xa ufaka iodolo yakho
Ukuba okanye xa iBitcoin inyuka yaya kuthi ga kwi-57,200 yeedola, umda wakho uya kwenziwa ngumthengisi wakho. Ngokubalulekileyo, iodolo iya kuhlala injalo de kufikelelwe eli xabiso, okanye uyirhoxise.
Sigubungele indlela yokwenza ukungena imakethi xa ukhetha ukuthengisa i-Bitcoin, ke ngoku singathetha malunga neyakho Phuma qhinga. Ukuba nesicwangciso sokuphuma kuyindlela entle yokuphepha ukulahlekelwa yimali eninzi kurhwebo olungayi kucwangcisa. Emva kwayo yonke loo nto, kuhlala kukho ukubakho kurhwebo lweBitcoin ukuya kwelinye icala kunokuba ubulindele.
Ii-odolo 'zokuyekisa ukulahleka' zisetyenziswa ngabarhwebi bazo zonke iimilo kunye nobukhulu. Ukubeka ngokulula, ngokongeza le odolo kurhwebo ngalunye, uyakwazi ukumisa ilahleko yakho kwindawo ethile. Injongo yoku kukuthintela ekulahlekelweni ngaphezulu kunokuba ufuna okanye unokufikelela.
Jonga umzekelo ongezantsi wendlela i-stop-loss order engakhusela ngayo urhwebo lweBitcoin kwilahleko enkulu:
Uthengisa iBitcoin ngokuchasene neeponti zaseBritane
I-BTC / i-GBP inexabiso le- $ 38,095 kwaye uthatha isigqibo sokubeka i- kuthenga umyalelo
Awufuni kulahlekelwa ngaphezulu kwe-3% kolu rhwebo
Kananjalo, ubeka i-stop-loss order ngo-3% ngezantsi ixabiso lokungena
Ukuba ubuya kuhamba ngokufutshane kwaye ubeke i thengisa umyalelo-setha i-stop-loss order kwi-3% ngaphezu ixabiso lokungena
Ii-odolo zokuyeka ilahleko zizenzekelayo. Ke, wakube ubeke iodolo yakho unokuhlala umva ulinde ixabiso leBitcoin ukuba inyuke okanye yehle. Iqonga lokurhweba liya kwenza iodolo yakho yokumisa ilahleko yakho ngokukhawuleza xa iasethi isiwa / inyuka iye kuloo xabiso.
Olunye ulungelelwano oluluncedo xa ujonge ukufunda indlela yokuthengisa i-Bitcoin 'ngumyalelo wokwenza inzuzo'. Le ifuna inkcazo encinci njengoko ithelekiswa nomyalelo okhankanyiweyo wokuphulukana nelahleko. Umahluko ocacileyo kukuba ii-odolo zokuyeka ilahleko zithintela ilahleko yakho ekuphumeni ezandleni zakho-ngelixa ii-odolo zenzuzo zithatha inzuzo yakho.
Kananjalo, i-odolo yengeniso ixelela umrhwebi wakho ngexabiso apho ungathanda ukuvala urhwebo lwakho lweBitcoin kwaye ukhuphe inzuzo yakho.
Bona umzekelo ongezantsi:
Ufuna ukwenza iipesenti ezi-6 kurhwebo lwakho lweBitcoin
Kananjalo, ukuba ungena nge kuthenga iodolo- kuya kufuneka ubeke i-odolo yenzuzo kwi-6% ngaphezu ixabiso lokungena
Ukuba ungena kwintengiso nge thengisa umyalelo - kufuneka ubeke inzuzo kwi-6% ngezantsi ixabiso lokungena
Njengoko kucacile ukubona kumzekelo ongentla, nokuba lihamba ngaphi ixabiso leBitcoin, unomyalelo endaweni yokumisa ilahleko / ukutshixa kwinzuzo. Ngayiphi na indlela, isikhundla siya kuvalwa ngokuzenzekelayo ngumthengisi, ngexabiso eliyalelwe nguwe.
Icandelo 3: Funda uLawulo loMngcipheko weBitcoin
Elinye lawona macandelo abaluleke kakhulu ekufundeni ngokuchanekileyo indlela yokuthengisa i-Bitcoin kubaqalayo kukuqonda ulawulo lomngcipheko.
Njengoko sichukumisile, i-Bitcoin yeyona nto ibaluleke kakhulu. U-Ergo, uzilungiselele ngcono, kuya kuba ngcono ngakumbi kwiinzuzo zakho zokurhweba. Uchitha kwaye ubeka emngciphekweni imali yakho oyisebenzele nzima emva kwayo yonke loo nto.
Ngamafutshane, izicwangciso zolawulo lomngcipheko zibandakanya ukuseta imigaqo kunye neeparameter zakho ngaphambi nangexesha lokuthengisa. Jonga apha ngezantsi ukuphefumlelwa xa kufika ixesha lokuba ufunde indlela yokuthengisa i-Bitcoin kunye nokwenza isicwangciso esifanelekileyo kwiimfuno zakho.
Ulawulo lweBitcoin Bankroll
Ulawulo lwebhanki ye-Bitcoin sisicwangciso esisetyenziswa rhoqo ngabarhwebi kuwo onke amanqanaba obuchule. Ukwenza le nkqubo ibe lula- sebenza ngeepesenti.
Unokugqiba kwelokuba uthabathe isibonda ngasinye kwi-3%. #
Oku kuthetha ukuba akunamsebenzi nokuba une- $ 100 okanye i- $ 100,000 kwiakhawunti yakho yorhwebo-uyakuhlala ubeka umngcipheko kwi-3% kwisikhundla.
Kananjalo, ukuba une- $ 3,000- musa ukubeka emngciphekweni ngaphezulu kwe- $ 90.
Ukuba unayo i-1,000 30 yeedola eseleyo, sukubeka ngaphezulu kwe- $ XNUMX.
Le nkqubo ilula kakhulu ukongeza kwisicwangciso sakho, nokuba unamava kangakanani kurhwebo lweBitcoin. Yenza nje ukubala ngokukhawuleza ngaphambi kokudalwa komyalelo ngamnye-ngokusekwe kwibhalansi yeakhawunti yakho yorhwebo ngelo xesha.
Ukurhweba ngeBitcoin ngomngcipheko kunye noMvuzo weRatio
Isicwangciso somngcipheko kunye nomvuzo sifezekiswa ngokulula. Cinga nje malunga nokuba ufuna ukuzuza malini xa ujonge ukurhweba ngeBitcoin- kwaye uzimisele kangakanani ukuba semngciphekweni wokuyifumana.
Masithi kuyo yonke i- $ 1 oyibambayo, unqwenela ukubona i- $ 2 njengembuyekezo
Esi iya kuba sisicwangciso esili-1: 2 somngcipheko / somvuzo
Kananjalo, ukuba ubambisa i $ 200- ulindele ukwenza i $ 400 kwinzuzo
Ukuba ubeka emngciphekweni i- $ 1,000 kwisikhundla seBitcoin- ungalindela i-2,000 yeedola kwinzuzo
Oku kukhankanywe ngasentla kokulahleka kunye nemiyalelo yokuthatha inzuzo zibaluleke kakhulu ekusebenziseni esi sicwangciso ngokupheleleyo.
Kulabo abangaziyo, ukunyusa kuthetha ukuba ungarhweba ngeBitcoin ngaphezulu kokulinganisela kweakhawunti yakho. Ukunyusa kuhlala kuboniswa njengomlinganiso okanye okuninzi kwaye kubonelelwa ngabananisi abadumileyo ecaleni kweBitcoin CFDs.
Jonga apha ngezantsi umzekelo wokuphakama osetyenziselwa urhwebo lweBitcoin:
Okwangoku une- $ 1,000 kwiakhawunti yakho yorhwebo
Ugqiba ekubeni ubeke i kuthenga Umyalelo kwi-BTC / EUR
Iqonga lokurhweba likubonelela nge-1: 2
Oku kuguqula imali yakho eyi-1,000 2,000 kwi-XNUMX
Njengoko ubona, kwanokwandisa nje isibonda sakho kabini kunokuba nefuthe elikhulu kwinzuzo yakho. Ingxaki yile, oku kunokuba likrele elintlangothi-mbini. Ngale nto, sithetha ukuba ngeli xesha ukubonelela kukunika ithuba lokuphakamisa iinzuzo zakho, ngelishwa, ukuba izinto zihamba ngenye indlela zonyusa ilahleko yakho.
Ngokubalulekileyo, ii-CFD ngoku zivaliwe e-US ngumthetho. Ukuba uvela e-US, oku kuthetha ukuba awunakho ukufikelela kwiBitcoin CFDs ezinamanani. Abarhwebi base-UK bayakwazi ukufikelela kwi-CFDs, kodwa hayi kwi-Bitcoin, okanye nayiphi na enye i-cryptocurrency.
Eminye imimandla ivumela ukufikelela kubungakanani ngaphandle kwezithintelo ezikhoyo. Kananjalo, qiniseka ukuphanda ngento oza kuyifumana apho uhlala khona. Kukwacetyiswa ukuba uqiniseke ukuba ujongene nomnikezeli weBitcoin olawulwayo. Ezinye iindawo ezingalawulwayo zinokunikezela nge-1: 500 yokuphakamisa, ekunokuthi kungabikho semthethweni kwilizwe lakho.
Icandelo 4: Funda ngokuhlalutya amaxabiso eBitcoin
Ukugqitywa kwamacandelo 1-3, kuya kufuneka uzive ukhonjisiwe ngakumbi malunga nendlela yokuthengisa iBitcoin. Ngelixa icandelo elikhulu lokufunda libambelela kwiindidi zeodolo kwaye kunjalo- kubalulekile ukuqonda indlela yokuhlalutya amaxabiso.
Emva kwayo yonke loo nto, uninzi lwezigqibo zakho, kwaye ngethemba lokuba inzuzo, iya kusekelwa kwi-hypothesis yakho kwicala lexabiso leBitcoin.
Uhlalutyo olusisiseko kwiBitcoin
Ukufundisisa uhlalutyo olusisiseko kubandakanya ukugcina ulungelelwaniso ngeendaba zoqoqosho nezemali ezinokuthi zichaphazele ixabiso leBitcoin.
Jonga apha ngezantsi ukubonisa into ekufuneka uyijongile:
Iingxelo ezivela koorhulumente ngokubhekisele kwi-crypto-asethi
Ukuncintisana kweemali zedijithali kunye neemali zentengiso
Iziganeko zobume bomhlaba
Imixholo yemithombo yeendaba eyoyikisayo
Imivuzo yeBitcoin yemigodi
Iimali eziguqulweyo ze-Cryptocurrency
Iindleko zemigodi yeBitcoin
Imicimbi yezomthetho kunye nommiselo (okanye ukusilela)
Ukuba oku kuvakala ngathi kuninzi kakhulu ukugcina iso, unokufuna ukuqwalasela ukubhalisela inkonzo yokubhaliselwa kweBitcoin. Ngale ndlela, uya kufumana uhlaziyo lwexesha langempela kunye neendaba ezinxulumene ne-asethi oyithengisayo.
Ayitsho ngaphandle ukuba iinkonzo zeendaba zenza ukuba kube lula kakhulu ukuhambisa ixesha kwiimarike. Kananjalo, kunokwenzeka ukuba wenze inzuzo kwimizamo yakho yorhwebo ngeBitcoin.
Uhlalutyo lobuGcisa kwiBitcoin
Uhlalutyo lobuchwephesha luquka ukusebenzisa idatha yamaxabiso ukuvavanya uluvo lweemarike, zakudala nezangoku. Oku kunceda ukukhanyisa ukukhanya apho imeko elandelayo yeBitcoin ingaqala khona okanye iphele.
Ukusebenzisa iitshathi ezinjalo kuya kwenza izigqibo zakho zokurhweba zeBitcoin kube lula ukuya phambili. Ezinye zezona zikhombisi ziqhelekileyo zisetyenziselwa isalathiso samandla esihlobo, izikhombisi ze-MACD, umndilili wokuhamba kunye nesalathiso somndilili wesikhokelo. Nangona kunjalo, zininzi ngakumbi.
Kulabo abasazokuqonda ngokupheleleyo ubunzima bokuhlalutya kobuchwephesha- unokufuna ukufunda indlela yokuthengisa iBitcoin ngemiqondiso.
Iimpawu zeBitcoin zenziwa ziiprosesa ezinamava kwaye zinokufaniswa neengcebiso zokuthengisa. Oku kuthetha ukuba uyarhuma kwinkonzo kwaye akusekho mfuneko yokwenza naluphi na uhlalutyo. Endaweni yoko, kufuneka ubeke i-odolo ekhuthazwayo ukuba ikulungele.
Iimpawu zokuthengisa zeBitcoin ziya kubandakanya oku kulandelayo:
Thenga okanye Thengisa
Ixabiso lokungena elicetyiswayo
Ekugqibeleni, ixabiso lokulahleka kokuyeka
Apha kuFunda 2 urhwebo, sinikezela ngeemfumba ze imiqondiso ye-crypto -Ukugcina iiyure zakho zophando!
Icandelo 5: Funda indlela yokukhetha iBroker yeBitcoin
Ukukhetha umboneleli olungileyo wokurhweba i-Bitcoin kubalulekile. Siphanda kwaye sivavanya amakhulu wabarhwebi abakwi-Intanethi kwindawo yorhwebo. Oku kulandela uluhlu olungenanceba lweemetrikhi zokufumana ezona ziqonga zibalaseleyo zabafundi bethu.
Xa kufika ixesha lokuba wenze olwakho uphando, kwibhidi yokufumana iqonga lokurhweba ngeBitcoin elifanele ixesha lakho - ungakhangela uluhlu lwethu lokujonga olungezantsi ukuze uphefumlelwe.
Ukusilela kommiselo, ngakumbi xa kuthengiswa imali ye-imali yedatha, kufuneka kuthintelwe. Ezi zithuba zaziwa ngokuqhekezwa. Ngapha koko, ngekhe wazi ukuba umrhwebi uvumelekile na kude kube lixesha.
Ukuthintela ukungaziphathi kakuhle, ubusela, kunye nenkohliso- kubalulekile ukuba ubhalise kunye nomnikezeli weBitcoin olawulwayo. Kwabo abangaziyo, uya kwazi ukuba iqonga lokurhweba lilawulwa njengoko liza kubonisa inombolo yelayisensi kwiwebhusayithi yayo.
Amaqonga olawulo aqhelekileyo abonwa kwindawo yokurhweba yiCCA (UK), ASIC (Australia), MAS (Singapore), ICySEC (Cyprus), kunye neFINRA (US). Kukho ezimbalwa, kodwa ukuba uyayibona le mibutho kubarhwebi bakho obakhethayo, uyazi ukuba usezandleni ezikhuselekileyo.
Bonke abarhwebi abalawulwayo kufuneka bahambelane noluhlu lwemithetho engalalanisi eyenziwe ngabaphathi bezezimali. Oku kubandakanya ukungafihli kwemali, ukwahlulwa kwengxowa mali yomthengi, ukuphicothwa rhoqo kunye neenkcukacha, kunye nokunye. Oku kugcina indawo yokurhweba kwi-Intanethi icocekile kwaye ilungile kuye wonke umntu.
Ukugcina amavili eshukuma kwaye unikezela izigidi zabaxumi ngenkonzo yemarike yemihla ngemihla - bonke ababoneleli ngeBitcoin baya kubiza iifizi zokurhweba kunye / okanye iikhomishini.
Jonga ngezantsi ezinye zeefizi zokurhweba ezibonwa rhoqo zeBitcoin.
Ikhomishini ihlawuliswa ngokubanzi njengepesenti, eya kuthi isekwe kubungakanani besikhundla sakho seBitcoin.
U-Lett uthi umrhwebi wakho umisela umrhumo we-1% wekhomishini. Oku kuya kuhlawulwa kokubini xa ungena kwimakethi yeBitcoin kwaye kuphuma.
Kananjalo, ukuba uvula isikhundla seBitcoin esixabisa i-1,000 10 yeedola, uyakuhlawula i-XNUMX yeedola kwikhomishini yokungena kwintengiso
Ukuba isikhundla sakho sixabisa i-1,600 yeedola xa uvala urhwebo-uya kuhlawula i-16 yeedola- njalo njalo.
Abanye abathengisi abakwi-Intanethi bachaza kangange-2% kurhwebo ngalunye. Njengoko unokuthelekelela, ezi ntlawulo zinokukutya kungekudala inzuzo yakho.
Umrhwebi odumileyo kwi-Intanethi i-eToro ikuvumela ukuba uthengise iBitcoin ngokungahlawuliswa ngokupheleleyo. Kananjalo, kwintengiso engentla, ngewugcine i-26 yeedola kuthengiso lwakho lweBitcoin olulandelayo!
Ukusasazeka kuko konke ukurhweba ngumahluko phakathi kwangoku kuthenga Ixabiso kunye thengisa Ixabiso leBitcoin. Oku kusasazeka kuqinisekisa ukuba iqonga liguqula ingeniso engabalulekanga kwintengiso.
Makhe sicinge kuthenga Ixabiso leBitcoin yi- $ 47,765
The thengisa Ixabiso li- $ 48,142
Ukubala ngokukhawuleza kubonisa ukuba oku kulingana nokusasazeka kwe-0.79%
Kananjalo, uqala urhwebo lwakho nge-0.79% kubomvu
Njengoku kungasentla, ukuba ingqekembe yedijithali inyuka ngexabiso nge phezu 0.79%, oku kubalwa njengenzuzo kurhwebo lwakho.
Isifundo sethu sendlela yokuThengisa isiKhokelo seBitcoin safumanisa ukuba uninzi lwabarhwebi abatsha abenza ukuba ukwazi ukufaka imali kwiakhawunti yakho ngokukhetha iindlela zokuhlawula.
Ezona ntlobo zeentlawulo zikhawulezayo nezizezona zilungileyo ngamakhadi etyala kunye neebhanki, kunye ne-e-wallets. Cinga kwimigca ye-PayPal, iNeteller, kunye ne-Skrill yokugqibela.
Eyona ndlela icothayo yokuhlawula umboneleli wakho weBitcoin ukuba ayenze iya kuhlala ingumtshintshelo wocingo lwebhanki- onokuthatha naphina phakathi kweentsuku ezimbini ukuya evekini.
Umthengisi ogqwesileyo wokurhweba iBitcoin kwi-Intanethi
Besitshilo ngaphambilana ukuba asiyithathi kancinci into yethu yokurhweba kwaye sibandakanya uninzi lweemetrikhi eziphambili zokuvavanya.
Ngaloo nto engqondweni, sikugcinele imfumba yemisebenzi ye-intanethi. Jonga ngezantsi umthengisi wethu obalaseleyo wokurhweba ngeBitcoin kwi-Intanethi namhlanje!
1. I-AVATrade-Urhwebo lweBitcoin CFDs kunye neeMfumba zoFikelelo zoHlahlelo lweTekhnoloji
I-AvaTrade yaziwa kakhulu kwindawo yokuthengisa yeBitcoin. Ngapha koko, umrhwebi okwi-Intanethi ebeququzelela ulwandle lwabarhwebi abahlukeneyo ngaphezulu kweminyaka elishumi ngoku. Eli qonga lokurhweba lisebenza phantsi kweemfuno ezingqongqo zokuthobela njengoko zichazwe yimizimba emininzi. Oku kubandakanya iFCA, ASIC, MiFID, JFSA, PFSA, BVI, FRSA, FSCA, IIROC, kunye neADG.
Le broker ephezulu ibonelela ngokufikelela kwizinto ezininzi ezinokuthengiswa. Oku kubandakanya izibini ze-crypto-fiat ezinje nge-BTC / USD, BTC / JPY, kunye neBTC / EUR. Ezi zibini ziya kuthengiswa njengee-CFD nangona kunjalo, khumbula imali yokuhlawula imali ngobusuku. Ukuba uthanda ukuthenga nokuthengisa ekuhambeni, umrhwebi une-app yakhe ebizwa ngokuba yi-AvaTrade GO. Insiza inexabiso elinomdla lwezixhobo zemfundo kunye nezixhobo zokurhweba.
Oku kubandakanya i-simulators yeakhawunti, iidemo, iitshathi ezinokuhlengahlengiswa, izikhokelo zorhwebo, kunye nokunye. Ngaphaya koko, i-AvaTrade iyahambelana ngokupheleleyo neMT4 kunye neMT5. Ukuba uthanda ukufumana ukuqonda kwabanye abathengisi beBitcoin kwindawo yentlalo - unokufuna ukudibanisa iakhawunti yakho yorhwebo kwiDupliTrade okanye iZulutrade apho 'ungathanda', 'ulandele', kwaye 'ubeke izimvo' kwabanye abathengisi, amacebo, kunye nohlaziyo .
Le yindlela entle yokwenza iqhinga kunye nokufunda ukungena nokuphuma kwintengiso kubarhwebi abanamava ngeemfumba zamava asebenzayo. Uninzi lwabathengi banako ukufaka imali besebenzisa amakhadi etyala kunye namatyala ebhanki kunye nokudluliselwa kwebhanki. Abanye baya kuba nakho ukusebenzisa ii-e-wallet ezinje ngeNeteller- nangona oku kungabandakanyi i-EU ne-Australia. Ungaqala ngedipozithi encinci ye- $ 100
Idiphozithi encinci njenge- $ 100
Urhwebo lweBitcoin ngaphandle kokuhlawula ikomishini
Uhlelo olupheleleyo lweAvaTradeGO olunomxholo wemfundo kunye nezixhobo
Iakhawunti yokuqala yedemo iphelelwa emva kweentsuku ezingama-30
Icandelo 6: Funda ngokuThengisa iBitcoin namhlanje -Ukuhamba
Emva kokuba uyenzile yonke indlela eya kwiCandelo 6, ngokungathandabuzekiyo uziva ulungele ukufunda indlela yokuthengisa i-Bitcoin ngendlela efanelekileyo. Okokuqala, kuya kufuneka uvule iakhawunti ngomrhwebi olawulwayo nothathelwa ingqalelo kakhulu.
Ukugcina izinto zilula ngokulula, sisebenzisa i-Bitcoin broker eyiNtloko.com ekuhambeni kwethu.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukutyelela iwebhusayithi yeCapital.com kwaye ubethe 'Joyina ngoku'. Uya kudinga ukufaka ulwazi malunga nokuba ungubani.
Njengoko ubona, ulwazi olufunekayo kweli nqanaba lusisiseko esifanelekileyo- igama lakho, i-imeyile, njalo njalo.
Ngokubalulekileyo, ngokwe-KYC nganye ukuthintela ulwaphulo-mthetho lwezezimali- kuya kufuneka ulayishe i-ID yesithombe ekhutshwe ngurhulumente. Okulandelayo, kuyakufuneka ufake ubungqina bedilesi yakho. Uninzi lwabantu lusebenzisa ityala elisebenzisayo okanye ingxelo yebhanki yakutshanje.
Ukufakwa kwesazisi kungalinda ngoku ukuba awunaso isandla. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uyigcwalise le nxalenye yenkqubo yokubhalisa ngaphambi kokuba wenze isicelo sokurhoxa (okanye ubeke ngaphezulu kwe- $ 2,250).
Ukufumana i-imeyile yokuqinisekisa iakhawunti yakho, ngoku unokuxhasa ngemali iakhawunti yakho ukuze ukwazi ukuthengisa iBitcoin ekhaya!
Khetha kwiindlela ezikhoyo zokuhlawula apho uhlala khona kwaye ufake imali ongathanda ukuyifaka kwiakhawunti yakho entsha yorhwebo. Njengoko ubona, kwi-Capital.com kukho iindlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo, kuxhomekeke kukhetho lwakho, kunye nendawo okuyo.
Inyathelo 4: Qalisa ukuThengisa iBitcoin
Inkqubo yokubhalisa iphantse yagqitywa. Ukuthengisa iBitcoin ngoku kufuneka ubeke iodolo yakho kwiCapital.com njengoko kuxoxiwe ngaphambili. Zive ukhululekile ukuskrola uye kwiCandelo 2 ukuphinda uphinde wenze iiodolo.
Nangona kunjalo, kuya kufuneka ukhethe phakathi kokuthenga okanye ukuthengisa, kwaye uthengise okanye unciphise iiodolo oza kuqala ngazo.
Njengoko besesitshilo, kukwabubulumko ukuseta ukulahleka kokuyeka kunye nokuthatha inzuzo kuyo yonke intengiso.
Khetha isixa semali yakho, jonga lonke ulwazi olufakileyo, kwaye ucofe u 'Vula urhwebo'. Okwangoku, iCapital.com iya kuyenza ii-odolo zakho kwaye xa uyalele.
Funda indlela yokuThengisa iBitcoin-Isigqibo
Kule nto funda indlela yokuThengisa isikhokelo seBitcoin, sithethile ngamantongomane kunye neebhanti zorhwebo ngokubaluleka kolawulo kunye nolawulo lomngcipheko. Kukwabaluleke kakhulu ukuba ungene kulo naliphi na iphulo elitsha amehlo akho evulelekile kwimirhumo enokubakho.
Ngokubalulekileyo, ngaphandle kokuba ucwangcise ukurhweba ngokungakhathali usebenzisa imiqondiso okanye isixhobo seKopi sokuThengisa-kuya kufuneka uzifundise kakuhle kwintengiso. Oku kufanele kubandakanya ukufundwa okusisiseko kunye nohlalutyo lobuchwephesha, ukuzama iikhosi ezithile zeBitcoin, kunye nokubandakanya icebo lokurhweba elicacileyo kwindawo nganye.
I-Capital.com ikhanya kuzo zonke iinkalo. Apha unako ukurhweba i-Bitcoin ikhomishini-mahhala - kwaye kwindawo ekhuselekileyo nelawulwayo (enkosi kwi-FCA, i-CySEC, i-ASIC, kunye ne-NBRB). Umthengisi okumgangatho ophezulu unikezela ngeakhawunti yedemo yasimahla kwaye wamkela iimfumba zeentlobo zentlawulo ezikhawulezayo nezifanelekileyo. Ngapha koko, unokuqalisa ukurhweba ngeBitcoin ngaphantsi kwemizuzu eli-10!
Ngaba ndingafunda indlela yokuthengisa i-Bitcoin mahala?
Ewe unokufunda ukuthengisa i-Bitcoin simahla usebenzisa iakhawunti yedemo ukuba umthengisi wakho unikezela ngayo. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba wenze umsebenzi wakho wesikolo kwaye ufunde ii-ins kunye nokuphuma kwintengiso. I-eToro ibonelela ngeakhawunti yasimahla yeBitcoin elayishwe nge- $ 100,000 kwiingxowa-mali zamaphepha ukuziqhelanisa nazo.
Ndiza kuyigcina njani iBitcoin xa ndiyithengisa?
I-Bitcoin inokugcinwa kwisipaji sakho sabucala ukuba unqwenela. Nangona kunjalo, ukuba ugcina iingqekembe zakho zedijithali kwiqonga lokurhweba le-eToro-unesibonelelo esongeziweyo sommiselo osuka kwimimandla emithathu. Ungayichazanga eyokuba oku kuza ngaphandle kwentlawulo eyongezelelweyo kwaye urhwebo alunakhomishini!
Bobuphi ubuncinci endinokutyala imali kubo kwi-Bitcoin?
Elona xabiso lincinci okwaziyo ukurhweba okanye ukutyala imali kwiBitcoin ixhomekeke kumthengisi wakho omkhethileyo. Kwi-eToro, ungarhweba ngeBitcoin ukusuka kwi- $ 25 encinci- ngaphandle kwekhomishini!
Ngaba ndingathengisa iBitcoin ngokuchasene nemali yokwenyani?
Unako ngokwenene. Oku kubizwa ngokuba yi 'crypto-fiat', okanye kwezinye iimeko 'ukuwela kwemali'. Izibini ezithile zeBitcoin zibandakanya i-BTC / i-EUR, i-BTC / i-USD, i-BTC / i-GBP, i-BTC / i-JPY, njalo njalo.
Ngaba ndiza kuba nakho ukwenza imali ngokuthengisa iBitcoin?
Ewe, ukuba uqikelela ngokuchanekileyo ukunyuka okanye ukuhla kwexabiso leBitcoin - emva koko ubeke ulungelelwaniso oluchanekileyo- uya kwenza inzuzo kurhwebo lwakho.